Braemar 9 - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Pacific Coast Property
U-Pacific Coast Property unokuphawula okungu-935 kwezinye izindawo.
Isendaweni ekahle, leli fulethi eliphansi elifudumele nelimemayo elinendawo yokungena yangasese lisendaweni ekahle yeholide lakho e-Forster.
Itholakala kahle, leli fulethi eliphansi elifudumele nelimemayo elinendawo yokungena yangasese lisendaweni ekahle yeholide lakho e-Forster.
Le ndlu yokulala esanda kulungiswa engu-2 ihlangabezana nazo zonke izidingo zakho zekhefu lokuphumula.
Leli fulethi lesitezi esingaphansi linendlela yalo yokungena yangasese, igaraji lokuvala futhi indawo yokupaka eningi yasemgwaqweni iyatholakala esitebhisini somnyango wakho wangaphambili.
Imizuzwana ekude nakho konke lokhu okunikezwa yi-Forster, utholakala kalula emgwaqeni othule phakathi nebanga lokuya echibini, izindawo zokudlela, amathofi kanye ne-Forster Main Beach. Zulazula uye echibini ukuze uthole ikhofi lakho lasekuseni e-Colonel Cafe noma uphumule endaweni enotshani enomthunzi futhi ubukele izingane zidlala echibini elinetha lechibi.
Le ndawo yokwamukela inikezela ngekhishi elihlome ngokuphelele elilungele ubhekeni namaqanda ngaphambi kokubhukuda kwasekuseni. Amakamelo okulala anosayizi omuhle anawodilobhu, eyodwa inombhede wendlovukazi kanti eyesibili ine-tri bunk.
Ukuhamba nezingane kuzoba lula ngelondolo elihlome ngokuphelele kanye nobhavu wokugeza.
Uhlotshiswe kahle uyakwazi ukuphumula ekupheleni kosuku ngengilazi yewayini ezindaweni zokuphumula ezinethezekile futhi uhlele uhambo lwezinsuku ezilandelayo.
Ilineni alinikeziwe kodwa lingaqashwa ukuze uhlale. Ibhondi engu-$500 isebenza kukho konke ukubhukha.
Sondela eduze kwama-Majestic Humpback Whales noma ujabulele ukuhlala ogwini lwe-Bottle-Nosed Dolphins surfing futhi udlale ndawonye ku-Amaroo Cruise. Dlulisa umoya ngasohlangothini lolwandle amathrekhi ehhashi lakho elifaniswe ngamanye uye ku-Nine Mile Beach, ulwandle olucwebezelayo njengoba umhlane wakho uwisa nge-Horse About Tours. Thatha uye emanzini nge-Forster Sport kanye ne-Game Fishing uphishekela i-marlin emnyama, i-northern bluefin tuna noma ibha cod, ukuhlola izixhobo zasogwini noma ukuphuma eshalofini lezwekazi. Bhuka Ulwazi lwakho kanye neholide lakho noma ubuze Ithimba lethu ngolwazi olwengeziwe.
Ibungazwe ngu-Pacific Coast Property
Siyatholakala kubavakashi bethu ngaso sonke isikhathi uma usidinga.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-13719